Buffon, Sanchez & Gareth Bale Oo Hogaaminaya Shax Laga Sameeyay Magacyada Waaweyn Ee Aan Ka Qeyb Gali Doonin Koobka Aduunka Ee Russia 2018. - Laacib.net
Buffon, Sanchez & Gareth Bale Oo Hogaaminaya Shax Laga Sameeyay Magacyada Waaweyn Ee Aan Ka Qeyb Gali Doonin Koobka Aduunka Ee Russia 2018.
Kumanaan xirfadlayaal ah ayaa seegaya koobka Aduunka madama ay dhawr iyo toban wadan si rasmi ah u waayeen iney kasoo qeyb galaan dhacdada ugu weyn kubadda cagta, balse jariiradda Mirror Football ayaa soo xulatay shaxda kooxda ugu fiican ee laga waayi doono shaashadaha koobka Aduunka.
Wadamada waaweyn ee aan magacooda laga maqli doonin koobka Aduunka waxaa ka mid ah: Italy oo qasaaro kala kulmay Sweden, xulka Chile oo dhibaato weyn kala kulmay dhigiisa Brazil iyo sidoo kale wadamada Netherland, Bosnia, Greece, Ivory Coast, Cameroon, Ghana, Wales.
Marka lasoo hadal qaado ciyaartoyda waxaa goolka loo xushay goolhayaha halyeyga ah ee ka tirsan xulka qaranka Azzurri Gianluigi Buffon kaas oo xalay ku ilmeeyay garoonka San Siro kadib markii ay soo dhamaatay ciyaartii ay barbaraha gool la’aanta ah la galeen Sweden.
Waxey aheyd markii ugu dambeysay oo uu xirto maaliyadda qarankiisa tartan rasmi ah, madama uu isla xalay ku dhawaaqay inuu isaga fariisay ciyaaraha caalamiga ah.
Daafaca waxaa loo soo xushay afar xidig kuwaas oo tayadooda lagu soo xulay kaliyana maahan iney afartooda seegeen – waxey la macno tahay iney yahiin daafacyada ugu fiican ee aan ka qeyb qaadan doonin koobka Aduunka.
Leanardo Bonucci & Virgil van Dijk: Labadaan daafac waxey ku baxeen gacmaha Sweden – qaranka Netherland wuxuu ku group ahaa Sweden iyo France, mana u suuragalin iney booska labaad ka xoogaan inkastoo ay guul ka gaareen kulankii ugu dambeeyay.
David Alaba & Antonio Valencai: labadaba kama soo qeyb galayaan koobka Adunka – inkastoo ay yahiin xidigo waawey. 32-jirka United waxey u noqon laheyd markii 3-aad oo uu kasoo qeyb galayo tartanka balse ma calfan halka Alaba uu tartankii Euro 2016 ka heysto qibrad uu wadankiisa tartan ugu ciyaaro.
Naby Keita & Arturo Vidal: Waa laba xidig oo ka xamaasha Bundesliga balse nasiib darro kama soo muuqan doonaan Russia – Wiilka u carbuunan Liverpool wuxuu awoodi waayay inuu xulkiisa soo saaro isagoo ku group ah Tunisia, the Democratic Republic of Congo iyo Libya, halka Vidal uu isna badbaadin waayay qarankiisa madama kulankii la xasuuqay uu ganaax ku maqnaa.
Gareth Bale & Arjen Robben: Halyeygaan sadexda koob aduun ka qeyb galay [Arjen] wuxuu ku dhawaaqay inuu ka hawlgabay qaranka markii ay 2-0 kaga badiyeen Sweden isla markaana ay isaga hareen tareenka Russia. halka Bale xulkiisa ay mucjiso dhigeen Euro 2016 balse ay haddan gungoobeen.
Alexis Sanchez & Pierre-Emerick Aubameyang: Waa laba weerar oo cajiib ah balse midkood lama daawan doono bartamaha sanadka soo aadan. madama Gabon iyo Chile ay ka maqan yahiin dhacdada koobka Aduunka.
SHAXDA WEYSAY WORLD CUP:
Buffon, Bonucci, Van Dijk, Valencia, Alaba, Vidal, Naby Keita, Robben, Gareth Bale, Sanchez, Aubameyang
Jasper Cillessen, Gary Medel, Miralem Pjanic, Marek Hamsik, Henrikh Mkhitaryan, Riyad Mahrez, Edin Dzeko.